Kutaurirana naI. Biggi, anokunda iyo Cerros de Úbeda mubairo wenhoroondo dzekare | Zvazvino Zvinyorwa
Kutaurirana naI.Biggi, anokunda iyo Cerros de debeda mubairo wenhoroondo dzekare
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Makwikwi neMubairo, Hurukuro, Vanyori, Novela
Munyori weBasque Iñaki Biggi akunda iyo mubairo Makomo eEbheda enhoroondo yenhoroondo nemusoro wako uchangoburwa, Valkyries. Munyori zvakare we Iyo Sangment y Iyo Stradivarius fomula, nhasi tinokutsaurira iyi hurukuro Ndinokutendai zvikuru nemutsa wenyu, nguva nekuzvipira. Eskerrik asko.
I. Biggie: Kwete bhuku rekutanga, asi ingave iri bhuku na Vaongorori vatatu, yakanaka kwazvo sarja kukwezva vana kuverenga. Ini ndangobva kuverenga zvekare imwe yacho kuyedza kutsvaga iyo alchemical fomula iyo yandaiwana nayo. Uye zvechokwadi sei usingataure Salgari game Sandokan o Iyo nhema Corsair.
Kana ini handirangarire chakave chinhu chekutanga chandakanyora. Zvinhu zvakawanda, zvese zvakarasika. Asi chinhu chekutanga chandakanyora ine hwaro hushoma yakanga iri bhuku rangu rekutanga, Iyo Sangment, iyo yakatanga sengano pfupi uye ndokuguma nemapeji anopfuura mazana matatu.
I. Biggie: Pamwe Mwari wacho. Ini ndinofunga ndiyo novel iyo dzimwe nguva ndaverenga, zvechokwadi mamaki. Mavara aanodhirowa Mario Puzo zvinoita kunge zvisingakundike kwandiri. Vito Corleone chinhu chinotyisa asi chine chiremerera chayo. Iko kusanganiswa kunondinakidza.
I. Biggie: Tolkien, Maalouf. Asi Ndaseka zvakawanda naSharpe, Pratchett, Mendoza… Ndakaenda kune nyeredzi ne Asimov. Uye akapedza sooo achitya ne Stephen King. Agatha Christie uye wake Hercule Poirot. Pandinofunga nezvazvo ndinorangarira zvakanyanya uye nekuwedzera.
I. Biggie: Iñigo Montoya de Mwanasikana wamambo akapfimbana. Kurwa, kushungurudzwa, kutsiva, hofori, zvishamiso, kutambudzwa, rudo rwechokwadi. Ndezvipi zvimwe zvaungabvunze kubva mubhuku?
I. Biggie: Kuverenga ndofunga kwete. Ini ndinozviita mune chero chinzvimbo uye chero nguva. Ini ndinowana zvisingabviri nyore. Nyora yatove imwe nyaya: runyararo nenzvimbo kufamba. Kana ndiri mukushushikana kuzere, uye nekutya kwandinoita, Ndakabva ndatobhowekana uye zvese zvinondinetsa.
I. Biggie: Iko kune iyo kombiyuta, runyararo, nguva nenzvimbo. Handisi kukumbira zvakawanda, handizvo here?
I. Biggie: Manoveli angu ekutanga Ndakavanyora panguva yandaive kunyudzwa mune chero nhoroondo nhoroondo kuverenga nemazano erangano akawira mumaoko angu, uye vakandimaka zvakanyanya. Saka ndinofungidzira kuti ndinofanira kutaura Philip Van Den Bergen uye Iyo Sistine Kubatanidza, Ken Follet uye Mbiru dzenyika, Amin Maalouf uye Rwendo rweBaldassare, Umberto Eco uye Zita rerosi...
I. Biggie: Zviri pachena nhoroondo yenhoroondo. Asi zvakare, uye zvakawanda, iyo nhema nhema nemabasa mazhinji e sainzi ngano kana fungidziro. Kune mamwe marudzi, kwete mazhinji, andisina kujaira kuverenga, asi ini ndagara ndiri mumwe weavo Iwo anoverengwa kusvika pakanyorwa yeiyo colacao pese paunodya kudya kwemangwanani.
I. Biggie: Iye zvino ndine Nguva dzeTariro, yekupedzisira novel na Emilio lara, uye na Gataca kubva kuna Frank Thilliez.
Nezve kunyora Ndiri nekwakugadziriswa kwenyaya yangu yechishanu, ndakamumirirapakubuda kwechina, iyo ichaonekwa mu chitubu, uye kupedza kugadzirira chimwe chechitanhatu iyo yatopinda muchikamu chekunyora, kana zvinyorwa zvanyorwa. Vari akazvimirira oga mumwe nemumwe uye ini ndinowanzo farira kuchengetera marongero avo, kana vakunda.
I. Biggie: Zvakanaka, nei tichizozvinyengera. Sezvawataura chaizvo, kune vanyori vakawanda uye isu tese tinoda kuona mabasa edu muzvitoro zvemabhuku, zvakatibhadharira maawa akawanda, mufaro nekutambura, uye kwete kudiwa kwakakwana kwekutora zvese. Vaparidzi vanotora njodzi dzemari uye dzimwe nguva hazvibhadhare. Isu tese tinoedza kuita kuti mabasa aoneke. Paunoburitsa bhuku, unenge watotya nezvekutengesa nekuti ramangwana rinotsamira pavari. Kana usati wawana chaburitswa, unoenda pasuo nesuo ... Hazvisi nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kutaurirana naI.Biggi, anokunda iyo Cerros de debeda mubairo wenhoroondo dzekare
Phillip Pullman's Goridhe Kambasi
Emily Dickinson. Makore 189 ekuzvarwa kwake. Kusarudzwa kwenhetembo